Ezinye izinhlobo ze-urticaria - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Ikhaya>Amafomu e-Urticaria>Ezinye izinhlobo ze-urticaria
Ezinye izinhlobo ze-urticariaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-03T10:54:57+01:00
Eqenjini "enye i-urticaria", i-urticaria ye-cholinergic nokuzivocavoca okubangelwa i-urticaria kanye ne-urticaria yokuxhumana iyaqoqwa. Ngokuphambene nalokho okutholwe esimweni se-urticaria yokuzenzakalela, ukungakhululeki okutholwa maqondana nalezi zinhlobo ze-urticaria kungenziwa ngamabomu, futhi izimpawu zalezi zinhlobo ze-urticaria, ngokungafani nalezi urticaria ngokomzimba, zenzeka ngaphandle kokugqugquzela okungokomzimba.
I-urticaria ye-Cholinergic ingenye yezinhlobo ezivame kakhulu ze-urticaria. “I-Cholinergic” isho ukuthi i-neurotransmitter acetylcholine ibamba iqhaza maqondana naleli fomu le-urticaria. Kanjani manje akwaziwa; kodwa-ke, i-acetylcholine ikhishwa emithanjeni, futhi isebenzisa amaseli amakhulu ngomshini ongaqondakali ngokuphelele. Isisusa esivame kakhulu se-cholinergic urticaria ukusebenza ngokomzimba (kwezemidlalo), kepha umkhuhlane, ingcindezi, izindawo zokugeza ezishisayo noma izihlambi, ngisho nokusetshenziswa kokudla okunongwe kakhulu noma okuphuza utshwala nakho kuyizimbangela. Amavili e-urticaria e-cholinergic ngokuvamile mancane kunalawo akhiwe kwezinye izinhlobo ze-urticaria futhi atholakala \_ "ezindaweni zokushisela \_" (njengezikhwama zangaphansi, emuva) zabantu abathintekayo. Izilonda ezimweni eziningi zivela kungakapheli imizuzu embalwa ngemuva kokukhuphula izinga lokushisa komzimba nokuqala kokujuluka, imvamisa kuqala entanyeni nasemzimbeni ongaphezulu. Ngemuva kokupholisa isifuba siyanyamalala kungabi bikho ngisho nomkhondo ngaphakathi kwemizuzu kuya emahoreni.
I-urticaria ye-Cholinergic ingadideka kalula ne
I-urticaria ebangelwa ukucindezela okungapheli futhi
I-urticaria / anaphylaxis ebangelwa ukuzivocavoca
Uma kwenzeka kuba i-urticaria engapheli ebangelwa ukucindezeleka, ukuzikhandla komzimba noma ukukhuphula izinga lokushisa komzimba akuholeli ezidlekeni nasekulume.
Uma kwenzeka kuba ukuzivocavoca okubangelwa ukuzivocavoca / i-anaphylaxis, ukuzikhandla ngokomzimba, njengasendabeni ye-cholinergic urticaria, kuholela ekuhluphekeni. Ngokuphambene ne-urticaria ye-cholinergic, noma kunjalo, ukulunywa kanti isifuba kuleli cala sidalwa wukukhubazeka komzimba hhayi ukufudumeza (isib. ngamanzi okugeza).
Ngeshwa, azaziwa izimbangela zamacala amaningi we-cholinergic urticaria. Ukwelashwa kwezimpawu (ukwelashwa okuyizimpawu) kuyindlela kuphela. Nge ama-antihistamines or i-ketotifen or i-danazol (okuhlobene eduze ne-hormone ye-androgen futhi ngakho-ke kufanele igcinelwe izinhlobo ezinzima zesifo) noma
Ukwenza lukhuni: Iziguli zingasebenzisa isikhathi sokuphika ngokuphelele ngokudala ukuhlaselwa kwe-urticaria ngendlela elawulwayo (isb ngokusebenzisa ukuzivocavoca umzimba) bese bengenawo amasondo kuze kube ngamahora angama-24. Ukuzivocavoca umzimba okulawulwayo izikhathi eziningana nsuku zonke kungavimbela ukuvela kokuhlaselwa kwesifuba.
Lapha amasondo avela lapho isikhumba sihlangana khona nento ethile (noma izinto ezithile). Izimbabazane ezihlabayo kanye ne-jellyfish yizibonelo zakudala. Ngokuqinisekile, le ndlela yokuxhumana i-urticaria yenzeka kuwo wonke umuntu ophilile onokuxhumana kwesikhumba okuhambisanayo. Impendulo ehambelana nokudla noma izinwele zezilwane ayivamile kakhulu. ILatex, nayo — ikakhulukazi emisebenzini yezempilo — ingaba imbangela ye-urticaria yokuxhumana. Imvamisa, izimonyo, noma izithako zazo (isb. Amakha) ziyizimbangela.
Yebo, ngisho namanzi angadala isifuba. Kodwa-ke, lokhu akuvamile kakhulu. Ngokwencwadi, zingama-35 kuphela iziguli ezaziwa emhlabeni wonke. Futhi ukusabela kungenzeka kakhulu ukuthi kungabi manzi ngohlobo lwawo olumsulwa, isithako samakhemikhali i-H2O, kodwa kumaminerali noma izinto ezingaziwa ezincibilikiswe emanzini. Ngenxa yokutholakala kwesifo ucwaningo olunembe kakhulu lunzima kakhulu. Uma i-urticaria ivela ngenkathi umuntu egeza noma egeza, lokhu akufanele kuthathwe njengesibonakaliso se- "aquagenic" urticaria: imvamisa kuba icala le-urticaria factitia (ebangelwe ukucindezela komshini kwe- "soaping" noma ukoma kamuva).